ब्यानर सागा: असामान्य खेल को खण्ड
खेल मा ब्यानर सागा खण्डमा पुरातन स्कैंडिनेवियाई दन्त्यकथा को एक माध्यम खेलाडी पकड। यो परियोजना कथा र आनन्द गेमप्लेको एक घटक छ। प्रयोगकर्ता अक्सर कार्य र आफ्नो सामरिक निर्णय गर्ने क्षमता को स्वतन्त्रता दिइनेछ। यो कठिनाइ छ सक्छ साहसिक को पाठ्यक्रम हटाउन कि यस कारण लागि हो।
ब्यानर सागा विशेषताहरु
खेल खण्डमा एक खेल चरणको मूल प्राचीन संसारको, जहाँ मान्छे शानदार प्राणीहरू (Drago, Varley र centaurs) छेउमा पक्ष बाँच्न अप खुल्छ। प्लट एक भाग्य द्वारा एकताबद्ध छन् जो तीन मुख्य वर्ण, को कथा बताउँछ। यो सबै गाउँमा एक मा डाकुओं आक्रमण, र त्यसपछि घटनाहरू एक शानदार साहसिक मा intertwined को श्रृंखला सुरु।
यो खेल मा ग्राफिक्स को कल्पना वातावरण जोड जो कार्टून, मिल्दोजुल्दो छ। नर्स पौराणिक कथा जो प्रत्येक मिशन को खण्ड समयमा देख्न सकिन्छ रोचक वर्ण, संग intertwined।
सुरुमा, कथा मुख्य पक्षहरू गर्न प्रयोगकर्ता परिचय र साना प्रशिक्षण बिताउनुहुन्छ। द को खेल मा ब्यानर सागा खण्डमा प्लेयर शहर हुन्छ, जो पछि भूमिकामा साथ सुरु हुन्छ। यहाँ, एक परिचित अनुहार संग एक चरित्र protagonist गर्न कार्य दिन्छ। संचार मात्र संवाद बक्स मा ठाँउ लिन्छ, र पहिलो मिसन पनि कुराकानी मार्फत बाहिर छ। लडाई शुरू "nobleman" जहाँ लगे शरण Skiflingi पल्ट, मा हुनेछ। यो नायक Hadd नाम आफ्नो मित्र व्यापारी बताउँछ।
Eirik को घाट गर्न दुश्मन र टाउको पराजित संगै (रातो तीर पालना)। यो यो ख्याति र आदर साथीहरूले कमाउन मद्दत गर्छ किनकी, लडाई बच्न आवश्यक छ। भ्रमण संग कुरा पछि मेहमान कारवां राजकुमार Ludin संग गाउँमा छोड्नुहोस्। शिविरमा मा रात खर्च र त्यहाँ एक युद्धमा कथा नभएसम्म मा, कारवां जान्छन्।
लडाई मा व्यवस्थापन संग कठिनाइ किनभने खेलाडी थप शक्तिशाली योद्धाहरू छेउमा हुनेछैन। तैपनि, खेल को सुरुमा प्रयोगकर्ता दोस्रो अध्याय शुरुवात अघि रोचक कहानी twists देख्नेछन्। तपाईं खेल मा रूसी ब्यानर सागा स्थापित भने, तपाईं भइरहेको छ के को वातावरण महसुस गर्न सक्नुहुन्छ। यो एक लाइसेन्स संस्करण वा समुद्री डाकू ग्राहक लागि दरार आवश्यक छ।
खेलको दोस्रो अध्याय मा ब्यानर सागा खण्डमा कार्ड को अन्य अन्त गर्न प्रयोगकर्ता हुनेछ। को protagonist अब Ubin र हात छ छोरी Alette शिकार dredge संग जो। अचानक आफ्नो पैतृक शहर Skogr मा आक्रमण छ। यो दुई निर्णय लिनुपर्छ। पहिलो - को शिकार देखि बाटो मा प्रावधान को संग्रह, र दोस्रो - जो रक्षा कब्जा गर्न संग उपग्रहहरु को सेट मा। अर्को लडाई पछि बिस्तारै प्लट असर कार्यहरूको एक श्रृंखला विकास गर्न संवादलाई मा हुन। सुरु समाधान घरहरू वा तार्ने जाँच गर्न छ। कुनै पनि मामला मा, किश्ती अघि त्यहाँ जहाँ विशाल आफ्नो छोरी को टाउको माथि क्लब प्रवेश एक दृश्य हो। सही समाधान यहाँ सीधा dredge मा एक तीर जारी छ, वा अन्य कुनै पनि विकल्प लागि Egil मर्छन्।
टोलीमा संग अर्को हात Iver उसलाई बन्दोबस्त छोड्न गर्न उत्प्रेरित जहाँ केन्द्रिय सिंहासन कोठा, उत्प्रेरित गर्नेछ। यो विकल्प देखि खेल यो चरित्र लागि विकसित गरिनेछ ब्यानर सागा थप जसमा निर्देशन निर्भर गर्दछ। यो परियोजना अक्सर खेल चरणको छनौट poses र यसलाई आफ्नै अनुभव आधारित सबै प्रयोगकर्ताहरूको लागि अझ राम्रो बनाउन छ। त्यसपछि लामो खेलाडीहरूलाई सम्झना गरिने व्यक्तिगत विशिष्ट कथा प्राप्त।
ब्यानर सागा मा कोड
खेल मा ब्यानर सागा Cheats विजय लागि जरूरी छैन। यो पनि अधिकतम स्तर मा कठिन हुने छैन, र कोड को परिचय गर्न चासो घट्छ।
विकासकर्तालाई यहाँ पासवर्ड मात्र ट्रेनर को अतिरिक्त स्थापना मार्फत प्रवेश गर्न सकिन्छ, किनभने कन्सोल आदेशहरू प्रदान गरेको छैन। यहाँ केही आदेशहरू छन्। मुख्य एक सबै विशेषताहरु मा मुख्य पात्र को अविश्वसनीय शक्ति को वाहेक छ। यसले हरेक अर्को लडाई सजिलो बनाउनेछ।
साथै, खेल मा ब्यानर सागा Cheats, वर्ण को सम्पादक खोल्न प्रसिद्धि को आवश्यक रकम थप्न सक्छ, तर पनि टोलीमा अनन्त आपूर्ति दिनुहोस्। मुख्य पात्र र्याङ्किङ्ग आफ्नो व्यक्ति तिनीहरूलाई वरिपरि मानिसहरूको मनोवृत्ति, साथै टोलीमा सामेल हुन आफ्नो सम्झौता असर। धेरै पसलहरु तपाईं उपग्रहहरु साथ शहर र अन्य गन्तव्यहरू बीच संक्रमण मा खाना चिन्ता छैन मदत गर्नेछ।
Alisa Bosconovitch - खेल मा वर्ण Tekken 6
कसरी "Maynkraft" मा बर्तन बनाउन बारेमा विवरण
Herobrin र कसरी कल गर्न कसले हो
बालिका लागि रोचक खेल
फुटर: कपडा कस्तो र कहाँ यो प्रयोग गरिन्छ?
मान्छे अक्षरहरू "Thrones को खेल" मेकअप धन्यवाद गर्न उत्तेजित गर्दछ
एक चिसो बाट स्प्रे
Cheats "पिता छोरी" - बाल्यकाल सम्झना?
पोलियो: बच्चाहरु को लागि खोप तालिका
कसरी Windows मा जावा स्थापना गर्न 7
हरिण जूता। आकार चार्ट छोराछोरीको जूता।
Cheesecake "जापानी कपास": नुस्खा, सामाग्री, स्वाद